तपाईको (सोमबार जेष्ठ ३१) को राशीफल -
२०७८, ३१ जेष्ठ सोमबार ००:५७ June 14, 2021 clickonLeaveaComment on तपाईको (सोमबार जेष्ठ ३१) को राशीफल
आफ्नो जोडीको सुंदर मुडले तपाईंको दिन रोशन हुन सक्छ। किन्न बाहिर जानु अघि तपाईंसँग भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं पार्टीको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना राम्रा मित्रहरूलाई निमन्त्रण गर्नुहोस् – त्यहाँ तपाईंको जयकार गर्ने धेरै मान्छे हुनेछन्। के तपाईंले कहिल्यै अदुवा र गुलाबसँगको चकलेट सुँघ्नुभएको छ? तपाईंको प्रेमी जीवन आज त्यस्तै स्वादिलो हुनेछ। तपाईं र तपाईंको जोडी आफ्ना साना मुद्दाहरूमा झगडा गर्नुहुनेछ तर यसले पछि गएर तपाईंको विवाह बर्बाद हुन सक्छ। अरूले भनेका वा सुझाव दिएका कुरामा भरोसा नगर्नुहोस्।
आफ्नो निराशावादी मनोवृत्तिको कारण तपाईं कुनै प्रगति गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ। यो तपाईंलाई चिन्ताले आफ्नो सोच्ने शक्ति घटेको छ भन्ने महसुस गर्नको लागि सही समय हो। उज्यालो तर्फ हेर्नुहोस् र तपाईंले आफ्नो विवेकमा निश्चित परिवर्तन भएको पाउनु हुनेछ। घरेलू विषय र बाँकी रहेका घरेलू काम सक्ने अनुकूल दिन। आफ्नी प्रियतमासंगको तपाईंको लापरवाह व्यवहारले घरमा परेशानी ल्याउन सक्छ। बाँकी रहेका परियोजना र योजनाहरू अन्तिम आकार लिन उत्प्रेरित हुनेछन्। तपाईंको जोडीले आज तपाईंलाई केही हानि पुर्याउन सक्छ।
स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याहरूले असुविधा गराउन सक्छन्। आज तपाईंलाई प्रदान गरिएका लगानी योजनाहरुमा तपाईंले दुई पटक हेर्नुपर्छ। आफ्नो हँसिलो प्रकृतिले सामाजिक जमघटमा तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउनेछ। आज, तपाईंलाई आफ्नो प्रेमीले तपाईंलाई सधैं प्रेम गर्नेछ भन्ने थाहा लाग्नेछ। तपाईं एक दिनको बिदामा जानु हुँदैछ भने चिन्ता नगर्नुहोस् – तपाईंको अनुपस्थितिमा पनि काम सजिलै चल्नेछ। कुनै अनौठो कारणले गर्दा समस्या भएमा – तपाईं फर्केर आएपछि यसलाई सजिलै समाधान गर्नुहुनेछ। छुने, चुम्बन, अंकमाल आदि कुराको वैवाहिक जीवनमा विशेष महत्त्व छ। तपाईंले यसलाई आज अनुभव गर्नु हुनेछ।
धूम्रपान गर्न छोड्नुहोस्, यसले तपाईंलाई स्वास्थ्य रहन मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो घरको वातावरण परिवर्तन गर्न अघि सबैको अनुमोदन लिएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। कसैले तपाईंको प्रसंशा गर्न सक्छ। महत्वपूर्ण व्यापार निर्णय गर्दा अरूको दबाबमा नआउनुहोस्। तपाईंको चुम्बकीय – बहिर्गमन व्यक्तित्वले मानिसहरूको मन लोभ्याउनेछ। दिन साँच्चै रोमान्टिक हुनेछ। तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग राम्रो खाना, सुगंध, आनन्द, सबै मिलाएर राम्रोसँग रमाइलो समय बिताउनु हुनेछ।
तपाईंले आज राम्रो स्वास्थ्य हासिल गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई सफलता दिनेछ। तर तपाईंले आफ्नो शक्ति नाश हुने कुराबाट जोगिनु पर्छ। मान्छे तपाईंबाट के चाहन्छन् र के जरूरी छ भन्ने कुरा तपाईंले ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तो देखिन्छ तर आज खर्च गर्नमा त्यति धेरै उदार पनि हुने प्रयास नगर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो घरको वातावरणमा अनुकूल परिवर्तन ल्याउनुहुनेछ। सुंदर मुस्कानले आफ्नो प्रेमीको दिन उज्यालो पार्नुहोस्। आफ्नो काम र आफ्नो प्राथमिकतामा ध्यान दिनुहोस्। आज, तपाईंले आफ्नो विवाहको दिन गरेका सबै भाकल साँचा रहेछन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ। आफ्नो जोडी तपाईंको प्राण हो।
मानसिक शान्तिको लागि केही दान र पुण्यको काममा आफूलाई समावेश गर्नुहोस्। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। अनपेक्षित जिम्मेवारीले तपाईंको दिनको योजना विग्रिनेछ – तपाईंले आफैलाई अरूलाई धेरै र आफ्नो लागि कम गरिरहेको पाउनुहुनेछ। आज आफ्नो प्रेमीलाई केही भावनात्मक कुरा नभन्नु होला। काममा तपाईंले एउटा राम्रो परिवर्तन अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ। तपाईंले उच्च पदका मान्छेसँग बाहिर गएर निवेदन गर्नु आवश्यक छ। विवाह भनेको एकै छानो मुनि बस्नु मात्र होइन। आफ्नो साथीसँग केहि समय बिताउनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
धेरै चिन्ताले मानसिक शान्तिमा बाधा पुर्याउन सक्छ। फिक्री, डर र चिन्ताको हरेक मात्राले शरीरलाई ठूलो असर गर्दछ, यसैले यसबाट बच्नुहोस्। साँझमा छोराछोरीसँग केही सुखद समय बिताउनुहोस्। रोमान्सले तपाईंको हृदय ढाक्नेछ। आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ – र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ। तपाईंको सञ्चार कौशल प्रभावशाली हुनेछ। तपाईंका आज आमाबाबुले कुनै साँच्चै नै आश्चर्यजनक कुराले तपाईंको जोडीलाई आशीर्वाद दिन सक्छन जसले अन्ततः तपाईंको वैवाहिक जीवनमा विकास ल्याउनेछ।
हावामा महल निर्माण गर्नाले तपाईंलाई फाइदा हुने छैन। तपाईंले परिवारको आशा पूरा गर्नको लागि केही काम गर्नुपर्छ। टाढाका आफन्तले आज तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछन्। अनपेक्षित रोमान्टिक झुकाव हुनेछ। आफ्नो जोडीलाई हल्का नसोच्नुहोस्। तपाईंका आज आमाबाबुले कुनै साँच्चै नै आश्चर्यजनक कुराले तपाईंको जोडीलाई आशीर्वाद दिन सक्छन जसले अन्ततः तपाईंको वैवाहिक जीवनमा विकास ल्याउनेछ।
परिवारका केही सदस्यहरूले आफ्नो डाही व्यवहारले तपाईंलाई रीस उठाउन सक्छन्। तर आफ्नो स्वभाव गुमाउने कुनै आवश्यकता छैन अन्यथा स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ। जे निको हुन सक्दैन त्यसलाई सहनु पर्छ भन्ने बुझ्नुहोस्। अनुमानले लाभ हुनेछ। समग्र रूपमा लाभदायी दिन हो, तर तपाईंलाई भरोसा लाग्ने कसैले तपाईंलाई गिराउन खोज्नेछ। आज आफ्नो प्रियलाई क्षमा गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईंका प्रयासहरूका लागि मान्छेले काममा तपाईंलाई पहिचान गर्नेछन्। आज तपाईंलाई एकजना आफन्तले आश्चर्य दिन सक्छ, तर यसले तपाईंको योजनामा बाधा पुर्याउन सक्छ।
प्रेम, आशा, विश्वास, सहानुभूति, आशावाद र इमानदारी जस्ता सकारात्मक भावनाहरू तर्फ आफ्नो मन आकर्षण गराउनुहोस्। यी भावनाहरू एकपल्ट पूरा स्थापित भएपछि – मनले स्वतः हरेक परिस्थितिको सकारात्मक प्रतिक्रिया गर्नेछ। आफन्तहरूको घरमा भेटघाटको लागि छोटो यात्रा गर्नाले आफ्नो दैनिक व्यस्त तालिकाबाट सान्त्वना र विश्राम मिल्नेछ। आज तपाईंलाई जीवनमा साँचो प्रेमको सम्झना आउँछ. चिन्ता नगर्नुहोस्, समय अनुसार सबै कुरामा परिवर्तन आउँछ, तपाईंको रोमान्टिक जीवन पनि त्यस्तै हो। आज एउटा राम्रो कार्यको परिणामले कामका शत्रुहरू तपाईंका साथी हुन सक्छन्। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। आज तपाईं वा तपाईंको जोडीलाई ओछ्यानमा चोट लाग्न सक्छ, त्यसैले एक-अर्कासँग नम्र हुनुहोस्।
घरेलु चिन्ताले तपाईंलाई चिन्तित बनाउन सक्छ। तपाईंको निवेश र भविष्यको लक्ष्यबारे गोप्य हुनुहोस्। तपाईंको जोडी मद्दतगार र सहयोगी हुनेछ। यो अचम्मको दिनमा तपाईंका सम्बन्धमा भएका ती सबै उजुरी र ईर्ष्या अचानक हराउनेछन्। आज गरेका संयुक्त उद्यमहरू अन्ततः लाभदायी हुनेछन्, तर तपाईंलाई साझेदारको केही विरोधको सामना गर्नु पर्नेछ। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। विवाह दैवले मिलाउँछ; आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई यो साबित गर्नेछन्।
खुशीको समाचार प्राप्त हुन सक्छ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेशको लागि राम्रो समय। यो अचम्मको दिनमा तपाईंका सम्बन्धमा भएका ती सबै उजुरी र ईर्ष्या अचानक हराउनेछन्। आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ – र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई केही साँच्चै सुन्दर कुराले आश्चर्य गराउनेछन्।
तपाईंको आजको राशीफल (सोमबार २०७५ फाल्गुण २०) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
२०७५, २० फाल्गुन सोमबार ०१:४१ March 4, 2019 clickon
तपाईको (शनिबार पौष ४) को राशीफल
२०७७, ४ पुष शनिबार ००:५१ December 19, 2020 clickon
तपाईको ( बुधबार बैशाख ८) को राशीफल
२०७८, ८ बैशाख बुधबार ००:४९ April 21, 2021 clickon